उसको असफल प्रेम (भाग २) ....
“ऊ कति साधारण थिई, खासमा । उसको साधारण पहिरन, साधारण मेकअप अनि साधारण र प्राकृतिक फेशनले मलाई लोभ्याएको थियो । उसको साधारण पहिरनले गर्दा मैले सोचेको थिएँ – यत्तिको केटी पाएँ भने मेरो जीवन राम्ररी चल्छ !” उसले अति भावुकतापूर्वक बतायो । “बिचरा उसले अघिपछि भेट्नलाई समय पाउँदिन भनेर सबेरै ४ बजे म उसलाई लिन जान्थेँ, ऊ व्यग्रतापूर्वक मलाई नै पर्खेर बसेकी हुन्थी ।” आफ्नो कुरालाई सविस्तार मसामु वर्णन गर्दै उसले भन्यो –“तपाइँलाई थाहा छ ? म जानु अगावै ऊ आफू बस्ने घरको कोठाचोटा, कुनासुना सबै बढारकुढार गरेर ग्याँस चूलोमा कालो चिया पकाएर बसेकी हुन्थी । अनि त्यो बिहानीपखको जाडोलाई उसले मरीच राखेर बनाएको कालो चियाले सप्पै बिर्साइदिन्थ्यो ! हातमा चियाको कप लिएर मनेरै टाँस्सिन खोजे झै (तर नटाँसिएर) गरी आडैमा आएर बस्थी । मैले कल्पना गर्थे – यसलाई आफ्नो दुलही बनाएर लगेपछि त पचास हिउँद कटाएकी मेरी आमाले भरासापूर्ण साथी पाउँथिन नी ! ऊ आमासँगै मिलेर घरको व्यवहार समाल्थी ! अझ भनूँ, मेरी आमालाई आफ्नै आमा (सासू हैन्) ठानेर महारानी तुल्य पारेर राख्थी हो !”
केहि निराश हुँदै उसले भन्यो –“तर के गर्नु ? निष्ठूरीले पलभरको प्रीति गाँसेर गई !” उसको कुराले मेरो मुटुलाई बिझाउँदै गयो । मैले भनेँ –“तिमीसँग त्यस (केटी) को फोटो छ भने देऊ न त हेरुँ, कस्ती रहिछे तिमीलाई माया मारेर जाने निष्ठुरी ?” “हुँदैन् साथी ! के खान बेईज्जत गर्नु त्यसको फोटो देखाएर ? कम्तीमा पनि जीवन दर्शन बुझाएर एउटा गुन त लगाएकी छे त्यल्ले ! हुन त अझै मेरो मन मान्दैन् – त्यल्ले मलाई चटक्कै बिर्सेर गै भन्ने कुरा !” मनमा अलिकति भरोसा साँच्दै उसले भन्यो । “एभ्री नाईट आई सि यू, एभ्री नाईट आई फिल यू .......” टाईटानिक फिल्मको गीत राखेको रहेछ उसले आफ्नो मोबाईलको आगमन कलमा । मोबाईल बजेपछि गोजीबाट झिक्न खोज्दै उसले भन्यो –“सायद निष्ठुरीकै पो हो की !” ‘कति सम्झिराखेको यार ?’ मैले झर्किदै भनेँ । “साला के गर्थी त्यल्ले ? त्यसकै घरतिरको मेरो साथीले पो ग¥या छ यार ।” अलिकति निराश हुँदै उसले भन्यो “तैपनि केही खबर छ की, एक छिन् हैं !” “ए अँ म यहिँ छु...........के कुरा ..........खै त्यस्तै लाग्छ, ए हो र ? मलाई पनि त्यस्तै लाग्याथ्यो .........हुन्छ हुन्छ, ल ठीकै छ..........थ्याङ्कयू ल !” मोबाईल वार्तालाई टुङ्गाउदैँ उसले बतायो – “साला गैछे नि पोइल..........!” लामोसमय सम्म टेबुलमाथि आफ्नो हातभित्र टाउको लुकाएर बसिरह्यो । लामो समयपछि रसाएका आँखा लिएर पुलुक्क मतिर हे¥यो । बस् मैले कोरेको गजलको दुई शेयर गाएर उसको मनलाई शान्त पार्ने काम गरेँ –
मन मिल्ने मान्छेहरु नै टाढा टाढा भाग्दा रहिछन्
लुकी लुकी देऊतासँग अरुलाई नै माग्दा रहिछन्
तिर्खाएको संसार यो सबैजना प्यासी रहेछन्
प्यास आफ्नो मेटाउनलाई मान्छेहरु चाख्दा रहिछन्